Zibhodla umlilo izingane zesiboshwa | Isolezwe
Zibhodla umlilo izingane zesiboshwa
Isolezwe / 13 December 2012, 2:44pm /
UNKK SIBONGILE Dlamini nomyeni wakhe azivumela yena ukuthi wambulala ngoba emhlukumeza. Izingane zakhe zithi uhubhuza okabhejane unina wazo emva kokuba exoxe le ndaba kwabezindaba ngaphansi komkhankaso i- 16 Days of Activism Against Women and Child Abuse
PHUMLILE NTSELE noNQOBIZIZWE ZWANE
IZINGANE zowesifazane odonsa isigwebo seminyaka engu-16 ejele laseWestville ngecala lokubulala umyeni wakhe zithi azimdingi kulo mndeni futhi zifuna abolele ejele.
UNkk Sibongile Dlamini watshela leli phephandaba ukuthi leli cala walenza ngonyaka ka-2003 ngenxa yokuhlukunyezwa umyeni wakhe.
Ngesikhathi zibhobhoka okokuqala zixoxa neSolezwe ngalolu daba intukuthelo yazo beyibhalwe ebusweni ngonina, kanti zilibeke ngembaba elokuthi “ungumthakathi ombethe isikhumba semvu”.
“Umama wethu wavula isilonda esingasoze savaleka ezinhliziyweni zethu ngokuthengela ubaba izinkabi ukuze zimbulale ngoba nakhu egaqele amafa,” kusho enye yezingane zikaSibongile, ecele igama ligodlwe ngenxa yobungozi bukanina.
Iqhubeka ivumelana nezinye izingane zakwabo nalapho ithe into ebacika kakhulu wukuthi ngemuva kokuthi unina ebazwise ubuhlungu obukhulu useqhamuka manje esehlanakezela amaqiniso njengoba ekhuluma emithonjeni yabezindaba efuna ukuxegiselwa isigwebo ngoba ethi abazukulu nomndeni wonke uyawukhumbula ufuna nokulungisa amaphutha kanti futhi wayehlukunyezwa kanzima nguyise.
“Kungani nje egijima eyoqamba amanga kwabezindaba thina njengezingane zakhe nomndeni engasibheki futhi esho nokuthi akasidingi. Akekho noyedwa wethu ozihlupha ngokuyomvakashela ngoba ungundlovukayiphikiswa futhi wayesizonda sonke ehambela phezulu, eqhosha ngamabhizinisi kababa lo agcine embulalele wona,” kusho le ngane.
Bathi udaba lokuthi unina washiswa wuyise ngophalafini emhlukumeza ngamanga wodwa. Baveza ukuthi unina wayesebenza esitolo esipheka ukudla washiswa ngamafutha njengoba elimele kodwa manje unina uqhubeka nokuphazamisa umphefumulo kayise emathuneni umqambela amanga.
Izingane zithi unina wazixosha ekhaya ngemuva kokufa kukayise ngoba nakhu zinolwazi lonke ngetulo ayelihlela lokubulawa kukayise. Zithi zabuyele ekhaya ngoba eseboshiwe.
USibongile usanda kuzwakala emisakazweni ehlukene eveza ukuthi akasiyona ingxenye yokubulawa komyeni wakhe yize wayehlukumezekile emshadweni wakhe. Le nkulumo yakhe beyiyingxenye yezinkulumo zomkhankaso wokulwa nokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane i-16 Days of Activism Against Women and Children kule nyanga.
Watshela leli phephandaba ukuthi umyeni wakhe wamthola engento yalutho futhi kumanje akasenawo umndeni kodwa izingane zithi uyise ubeyisikhulu samabhasi eSiphingo enezitolo endaweni yakubo eNanda, eNewton C.
Udadewabo kamufi osadla anhlamvana nongathandanga namagama akhe, uthe udaba lokubulawa komfowabo lumvusela iminjunju futhi akanabo ubudlelwano nonkosikazi kamufi.
“Anginabo ubudlelwano obuhle nonkosikazi kamfowethu kangangoba angimvakasheli nasejele. Sihlukumezekile emndenini esesikufisa manje wukuthi siphole lesi silonda,” kusho lona wesifazane ngezimfishane.